Jaaliyada Ogaadeenya ee Victoria oo shirkoodii bilaha ahaa maanta isugu yimid qodobomuhiim ahana kaga hadlay.
Feb 10, (2013 (QOL) Maanta oo bishu tahay 10 February 2013 Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Victoria ayaa waxeey isugu yimaadeen shirkii Bilahaahaa oo ay ka soqeyb galeen dhamaan qeybaha kala duwan ee Jaaliyada, waxaa shirka lagu furay ayadaha Qur’anka Karimka isla markasna waxaa laguda galay qodabadii shirka ujeedadiisu ahayd.
Waxaa shirka dadihinayeey gudoomiyaha Jaaliyada Somalida Ogadenia ee Victoria Halgame Hikim Sheikh Abdullahi wuxuuna ugu horeyn u mahad naqay dhamaan dadkii shirka ka soo qeyb galay, Gudoomiyuhu wuxuu ka warbixiyay waxqabadka Jaaliyada iyo waliba halganka huabysan ee Ogaadeenay lagu xoreynayo meeshu u maraya, halgame Hikim wuxuu ku soo dhaweey gobta Halgame Sheikh Fatxi oo ku soo biray Jaaliyada Victoriahorayna uga hawlgali jiray Gobola NSW gaar ahaan Magaalad Sydney.
Halgame Sheikh Fatxi ayaa shirka wacdi aad u qimo badan ka jediyeey oo runti dhamaan dadkii madasha joogay ka qushuuciyeey, Jaaliyada Somalida Ogadenia ee Gobolka Victoria ayaa nasib u heshay in uu Halgame Sheikh Fatxi ku soo biro aadan u soo dhaweysay.
Waxaa isna shirka ka hadlay Halgame Hasan Abdinuur (Qubi) oo kadasha ka jeediyey tarikh kooban oo halganka Ogadenia ku saabsan, Gudoomiya ururka OYSU ee MelbourneMarwo Luul Abbdi Moalim ayaa shirka iyaduna kahadashay kana warbixisay waxqabka ururka OYSU Melbourne bishii la soo dhaafay iyo kaqeyb galka shirka guud ee Urur weynaha OYSU oo kadhici doona wadanka Mareekanka. Jaaliyada Soomaalida ee Victoria waxay ka mid tahay Jaaliyadka ugu firfircoon Pacifica, isla markaasna haben iyo maalin u taagan taageerida iyo hormarka halganka xaqa ah ee gayigha Ogadenia gumaysiga lagaga xoreynayo.
Isku soo wada duuboo waxaa shirkii manta la isku dhaafsaday aqoon isweydarsi iyo fikirado dhaxalgal ah waxaana laisalgartay in lajoogteeyo dadaalka loogu jiro hiilinta shacabka dulman ee Ogadenia wuxuuna shirku ku dhamaaday jawi farxadeed oo aad u dagan. Layla Abdi Qoraxay Media Qorahay99@yahoo.com